Hesi Mike! Kushambadzira Kunezve Nezve Kugadzira-Up | Martech Zone
Hesi Mike! Kushambadzira Iri zvakare NezveMake-Up
Svondo, Gunyana 23, 2007 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Nezuro, ndakagamuchira email kubva kumuverengi, Mike, uyo akabvunza kuti sei ndaizoisa pikicha pa blog yangu inonditaridza seane bvudzi rakasviba, rakakwana uye rakachekerera apo - muchokwadi - ndiri kuchena musoro uye kufuta. Sezvineiwo, iwo mufananidzo waunoona pane yangu blog ndeangu makore mashanu apfuura. Ini ndawana mapaundi mashoma uye vhudzi rangu rakanyanya kuchena, asi ndini ndiripo.
Pamusoro pangu pamusoro peji, iwe unowana mufananidzo wangu ndichisangana naSeth Godin. Mufananidzo uri mumusoro mangu uneni mune sutu imwechete nesutu yandakapfeka mumufananidzo naSeti. Ndiyo sutu yangu yandinoda uye ndichiri kuipfeka. Handisati ndambozvigadzira, asi ini ndinoona dumbu rangu rakatsamira pamusoro pebhandi rangu zvakanyanya kupfuura zvazvaimboita.
Mumwedzi wapfuura ndakakurudzirwa kudonhedza mamwe mapondo uye ndadonhedza gumi mapaundi. Mukuvimbika kwese, ndinogona kumira kudzikisa zana mapaundi. Ini ndakanyanyisa kufutisa - mhedzisiro yehupenyu hwekusarovedza muviri uye chikafu chakawandisa.
Zvisinei, ndakavhundutswa neemail yaMike asi ndakanzwa ndichimanikidzwa kuipindura. Chinangwa chemufananidzo wangu mumusoro mangu hachisi chekutsvaga mufananidzo unotyisa wandinogona kuwana uye kuutumira ipapo kutyisidzira vanhu. Mufananidzo wandinofarira. Ndiri, kutaura zvazviri, inozivikanwa mumufananidzo (hazvisi izvo CHETE kare) uye vanhu vanouya kwandiri nguva zhinji kuti vandizivise kuti vanoverenga blog yangu.
Mufananidzo wacho urikuita basa rawo… urikuisa kumeso kwekugamuchira blog yangu uye kuratidza vanhu kuti kune munhu chaiye kumashure kwawo.
Wakamboona here Pamela Anderson asina make-up? Pane chero munhu anokwira kuna Pamela ndokumuudza kuti ari 'kunyepa' kuvanhu nekuti anotaridzika zvakanyanya nani nemapondo ekuzora? Chokwadika kwete! Uye hunyanzvi hwake chete is kutaridzika zvakanaka.
Basa rangu harisi rekuve rechikadzi kana mutambi. Basa rangu kushanda mukati mekutengesa uye tekinoroji minda uye nekugovana ruzivo irworwo nevaverengi veblog rangu. Kana iwe uchifunga kuti ndiri kuita neimwe nzira munhu asina kunaka kana kusavimbika nekutora yakanaka yemakambani glamor kupfura kwangu pachangu nekuzvitumira mumusoro mangu… kuwana hupenyu.
Mike, iwe unofanirwa kuve uri mumwe murume anotumira hamburger yake kumashure nekuti haina kuita kunge yekutengesa. Wanyora here Tom Cruise asi uchimuzivisa kuti anofanirwa kutaridzika akapfupika sezvaari mumafirimu ake? Inotevera nguva iwe paunofunga kundibata neni kuburikidza neangu fomu fomu, murume kumusoro uye shandisa chaiyo email kero. Ini ndakanyora iyo email kero iwe yawakandipfuura uye iyo yakakwenya.
PS: Ini handina kupfeka chero make-up mumusoro wemufananidzo. 🙂
Nesimba Gadzira Mazwi Akakosha Ekushambadzira
Ooops! Makomendi adzoka.
Sep 24, 2007 na9: 23 PM
Douglas, makorokoto pakurasikirwa nemapaundi gumi! Yekutanga gumi ndiyo yakaoma kwazvo, asi chengeta yakadaro up
Sep 24, 2007 na10: 13 PM
Mushure mekuverenga kuburikidza ichi posvo ndakanzwa ndichimanikidzwa kutaura nezvazvo. Kudzidza hukama hweveruzhinji kwakandipa inonakidza maonero pamusoro pekare chirevo? Maonero ndeyechokwadi uye anofanirwa kutarisirwa.? Ndinoona zvichinakidza kuti vanhu vangani varipo - semuverengi Mike - avo vasingazive kuti chiitiko ichi chiripo, kana kuti vakagumburwa nacho zvachose. Ini ndinofunga kuti nharo yako inotsigira izvi seyakagamuchirwa tsika yaive yakanyatsogadzirwa. Izvo zvakanaka chaizvo kuona kumeso kwekugamuchira pamusoro peblog rako uye kwete zvachose kupfuura chiyero chechikonzero kana hunhu kuti uone kuti sei ungasarudze mudiki, kunyanya? Kugamuchirwa? chiso chakatarisa kupa kuruzhinji. Iyo Pamela Anderson ikakuruma yaive inonakidza uye inosetsa. Aka kaive kekutanga ini kuona dhi Pam asina makeys? murume, ndinonzwa kudaro? kunyepa! Ndine chokwadi chekuti hapana munhu (kunze kwaMike chokwadika) anokunyunyutira kufadza kwako kwekambani. Ini zvangu ndinofara kuti wakasarudza kuzvitumira uye zvakatonyanya kuti Mike afunge kukushevedza pairi, pasina vanhu vakaita saMike, hatimbofi takave nemufaro wekutsamwa kwako ikoko. Mushure mezvose, kwete chete kushambadzira? Zvakare nezve zvigadzirwa ,? iri zvakare nezve kugona kukanganisa kubaya kweapo neapo kwekusaremekedza nenzira iri yehunyanzvi uye panguva imwe chete zvine hungwaru uye nekugadzira zvakakwana kuti vatsause veruzhinji kudivi rako. Kuita zvakanaka.
Sep 24, 2007 na11: 24 PM
Ouch Doug, kuwira mumabatiro etrolls asiri kana kutumira makomendi? Ndinoshuva iwe rombo kurasikirwa uremu. Mumwe wevawaimboshanda navo, Dan W., anoenderera mberi nekunyarara akadonhedza mapaundi uye ndinovimba iwe unogona kuita zvakafanana.
Makorokoto pamapondo gumi, Doug, uye rombo rakanaka neremangwana rekutonga hutongi. Ndiri mumwe weavo vane rombo rakanaka, ndakakomborerwa neakakwira metabolism, asi ndine chokwadi chekuti ichadonha nekukasira, pandinosvika makore makumi matatu.
Basa rakanaka Doug rekudonhedza huremu. Zviri nyore kwazvo kuisa pamapondo uye zvakaoma kuti ubvise.
Nekudaro, ndiri kunetsekana kuti iwe ungashevedza mumwe munhu seizvi mune yeruzhinji posvo.
Uyu munhu Mike akakubata iwe, muchivande, kuti uuye nechimwe chinhu uye nekuti "chakakutyisa", izvo zvinoita kuti chive chakakodzera posvo?
Ndeapi mamwe maemail maemail aunogamuchira uye akashandura kuita mbiru pamwe unoda gwara rekuvanzika pane yako saiti?
Imwe yemashoko ako pamusoro apa kubva kuna Patrick Farrell anoti "kudonha kubatwa netrolls dzisingatombo tumira makomendi" asi ini handioni kuti email yakavanzika inoonekwa seyetirosi.
Zviripachena kuti Mike akaunza chirevo chakakodzera uye iwe ukachitaura mukati meichi posvo.
Ini ndinobvuma kuti zvinotsausa zvishoma kuve nemufananidzo wekare semusoro wako. Iniwo ndinobvumirana nei wakazviita zvakadaro.
Nekudaro, ko kana mumwe munhu achida kukuhaya iwe kuti uite hurukuro kana mharidzo uye ivo vachifunga kuti vari kutora mukomana kubva kumusoro wako, saka kana iwe ukaratidza uye uchitaridzika zvakasiyana?
Chero zvazvingava, basa rakanaka rekudonhedza huremu. Kuita kufamba kwemazuva ese uye kunwa mvura yakawanda kuchabatsira.
Zvakare, chikamu chidhiraivho zvakare. Ndinoziva zvakaoma asi unoita kunge munhu akazvipira. Unogona kuzviita. Vaverengi vako vane kutenda mauri.
Sep 26, 2007 na1: 13 PM
Hm. Iyi ndiyo posvo yandaiyedza kutaura nezvayo, asi handina kukwanisa. Zvino, ndinofara nazvo nekuti zvinondipa mukana wekuona zvinotaurwa nevamwe.
Handifunge kuti unotaridzika zvakasiyana mumunhu pane yako yemusoro wepikicha. Iyo "musoro wepamusoro" mushure mezvose, uye isu tinogara tichitaridzika zvakasiyana zvishoma kana iwe ukawedzera iro rese pasuru pamwechete. Chii chavanoda kuti iwe uite? Tumira mufananidzo wakazara wemuviri wako mumusoro? Zvino izvo zvaizonyatso kupa kune ruzivo uye dzidzo yatinowana kubva kune yako saiti, haufunge? (isa roll yemaziso uye "julie" kutsvinya pano) ini ndinogara ndichisarudza mablogiki kuti averenge zvinoenderana nekuti ndingawana here mufananidzo chaiwo weblogger.
Ini ndinopokana zvine mutsindo neshoko rekuti mufananidzo wako wekare uri kutsausa, kunyanya kana uchihayiwa kuti utaure kana kupa mharidzo. Iwe unonyatso kupa iwo masevhisi kusangano rangu uye ndinofanira kutaura kuti munhu wese anogara achitya nehukuru hwakawanda hwavanodzidza kubva kwauri. Hapana ane hanya nechitarisiko chako (sekureba sekugeza uye kupfeka, ndine chokwadi).
Seshamwari chaiyo uye waunoshanda naye bhizinesi ndinoti chengeta mufananidzo wako mumusoro sezvazviri uye usape imwe pfungwa. Inomiririra kunyemwerera kwako uye mutsa wepachokwadi; mazwi ako nezvakatumirwa zvinomiririra ungwaru hwako uye hukuru hwekuunganidza ruzivo uye hunyanzvi hwekuparadzira.
Grr. Iyi nyaya yakanyatso "tora yangu hoko kumusoro". Makorokoto pahuremu uye kuuchengeta, zvakadaro! Tinoda kuti uve noutano sezvaungagone kuva. Handigone kufungidzira kuti rudzii rwedynamo iwe raungave wakaita nesimba rakawanda… ..watch out world ……
Zvita 5, 2007 na3: 29 PM
Wow - munhu wese ane maonero ake pamusoro peichi posvo uye ndizvo zvakataurwa. Ini pachangu ndinofunga kuti yaive zano rakanaka kutumira izvi. Izvo zvaive ziso-kuvhura kwandiri kuti ndione kuti zvakakosha kuisa picutre yako pachako inotaridzika zvakanaka. Ehe, iwe haudi pikicha inoita kuti usazivikanwe, asi mune ino kesi, hauna. Kutenda nekunongedzera iyi pfungwa yekushambadzira kwatiri tese.